आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (५ साउन २०७८ मंगलबार, २० जुलाई २०२१) « Nepali Digital Newspaper
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (५ साउन २०७८ मंगलबार, २० जुलाई २०२१)
५ श्रावण २०७८, मंगलवार ००:०७
श्रीशाके १९४३ वर्षा ऋतु राक्षसनामक संवत्सर नेपाल सं. ११४१ वि.सं. २०७८ श्रावण ५ गते मंगलबार तद्अनुसार सन् २०२१ जुलाई २० तारिख आषाढ शुक्लपक्ष एकादशी अनुराधा नक्षत्र शुक्ल योग वणि करण १ः४६ पर बब करण आनन्दादिमा वज्र योग चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा भ्रमणशील रहला । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ५ः२१ मा भयो र सूर्यास्त साँझ १८ः५८ मा हुनेछ । हरिशयनी एकादशी व्रत, तुलसी रोप्ने, चतुर्मास ब्रत शुरु ।
मेष – ऋण, रोग र शत्रुप्रति सचेत रहनुपर्नेछ । व्यस्तता बढ्ला । विलासमा आकर्षण बढ्नेछ । ठूलो रकमको लगानीमा सचेत रहनुपर्नेछ । नियमकानुन तोड्नु उचित हुनेछैन ।
बृष – दिन शुभ र लाभवर्द्धक रहला । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्ने छ । आशा उत्साह थपिनेछ । सफलता प्राप्त हुनेछ । इष्टमित्रको साथ प्राप्त हुनेछ । सन्तानसुख मिल्नेछ । उन्नति पदोन्नति हुनेछ । आयस्रोत बढ्ला । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । आरोग्यता बढ्ला । बौद्धिक र रचनात्मक काममा सफलता मिल्नेछ । साहस सम्बन्धित काम बन्नेछ । सुख सम्पति वृद्धि होला । रसरागमा आकर्षित हुनुहुनेछ । मान प्राप्ति हुनेछ । भोज भतेरमा भाग लिनुहुनेछ ।
कर्कट – समय शुभ र सफलतादायक रहनेछ । आरोग्य वृद्धि हुनेछ । मिठो भोजन प्राप्त हुनेछ । सुख समृद्धि हासिल हुनेछ । बौद्धिक र रचनात्मक काम बन्नुका साथै रोकिएका काम बन्नेछन् । इष्टमित्रको साथ प्राप्त हुनेछ । सन्तानसुख पाइनेछ । मान महत्व बढ्नेछ । धर्मकर्ममा रुचि बढ्ला । दोडधुपछि समस्याको समाधान होला । विवादमा नपर्नुहोला ।
सिंह – आफन्तको सहयोग प्राप्त हुनेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ । वार्तामा सफलता प्राप्त हुनेछ । धन मान महत्व बढ्नेछन् । ऋण रोग र शत्रुप्रति जीत होला । काममा विजय प्राप्त होला । समस्या समाधान हुनेछ ।
कन्या – मिठो भोजन मिल्नेछ । रोकिएको धन प्राप्त हुनेछ । यात्रामा सफलता प्राप्त होला । धनसम्पति ऐश्वर्य बढ्नेछ । मित्रजनको सहयोग मिल्नेछ । सबै प्रकारले अनुकूलता वृद्धि हुनेछ । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्नेछ । आशा उत्साह बढ्ला ।
वृश्चिक – समय अनुकूल र फलदायक रहला । प्रेममा सफलता मिल्नेछ । विवादबाट बच्नुहोला । आरोग्यता बढ्ला । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । आर्थिक पक्ष पनि बलियो बन्नेछ । लगानी वृद्धि हुनेछ । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । उन्नति पदोन्नति हुनेछ । भोग विलासमा आकर्षण बढ्नेछ ।
धनु – धनको आवागमन भैरहनेछ । भागदौड वृद्धि हुनेछ । रोकिएको काम बन्नुको साथै लगानी उठाउन चाहेमा सफल रहनुहुनेछ । दैनिक काममा सफलता मिल्नेछ । सुख समृद्धि बढ्नेछ । विवादबाट बच्दै आफ्नो काममा लाग्नु श्रेयष्कर होला । अरुको भर नपर्नु नै हितकर रहला ।
कुम्भ – प्रयासरत काम बन्नेछ । देखापरेको समस्याको समाधान मिल्नेछ । मान प्रशंसा बढ्नेछ । शुभ समाचार प्राप्त होला । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बढ्ला । आरोग्यता वृद्धि होला । यात्रापरक काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । वार्तामा सफलता मिल्नेछ । व्यस्त रहनु हुनेछ ।
मीन – आरोग्यता बढ्ला । सुख शांति बढ्नेछ । मनोकूलको काम बनेर मन प्रशन्न हुनेछ । शुभ काममा भाग लिनु हुनेछ । यश वर्चश्व बढ्ला । धन यश मान पद प्रतिष्ठा बढ्ला । सुखशान्तिमा बढोत्तरी होला । रसरागमा रुचि बढ्नेछ । खेलकूद भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । सुखको वस्तुको लागि धन खर्च गर्नुहुनेछ । आँट पराक्रम बढ्नेछ । ऐश्वर्य वृद्धि हुनेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ ।